Global Voices teny Malagasy » Qatar : Takaro ry zareo lehilahy Qatari · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 30 Aogositra 2020 17:32 GMT 1	 · Mpanoratra Ayesha Saldanha Nandika (fr) i Claire Ulrich, avylavitra
Sokajy: Katara, Hevitra, Mediam-bahoaka, Teratany
Manana mponina manodidina ny iray tapitrisa eo ny Emirà ao Qatar , izay tsy teratany qatari ny ankamaroany. Marobe ireo mpila ravinahitra miaina ao Qatar noho ny asa fitadiavana no toa mihevitra fa olona tsy miraika / mihatakataka ry zareo Qataris: nisy lahatsoratra vitsivitsy am-bilaogy miezaka ny manaisotra ireny anganongano milaza fa sarotra ny maka ho namana an-dry zareo Qatari, indrindra fa ireo lehilahy.
“Mirehareha”. Sary an'i Mohammed Nairooz.
Vehivavy britanika sady bilaogera monina ao Qatar i Yousra Abdelaal, namoaka lahatsoratra iray nomeny lohateny hoe The Truth About Qatari Men (Ny marina momba ireo lehilahy ao Qatar) tao amin'ny Qatar Visitor  [angl] :
Betsaka ireo mpila ravinahitra no manana hevidiso momba ireo lehilahy ao Qatar. Heverin-dry zareo izy ireny fa sarotra atonina, tsy tia miresaka na misokatra amin'ny finamànana, ary tsy misy resaka mihitsy raha izay fifandraisana sôsialy, ho azy ireny. Betsaka amin'ireo mpila ravinahitra fantatro no nilaza tamiko fa rehefa mahita ireo lehilahy ao Qatar ry zareo, miaraka amin'ny thowb  (na dishdasha ) na ny ghetras  (na koa keffieh ), dia toy ny sakana apetraka hisakanana ireo Qataris tsy hifangaroharo amin'ireo mpila ravinahitra ireo fitafiana nentindrazana ireo. […] Ny marina dia ny ankamaroan'ireo lehilahy ao Qatar no tsy afaka ifampiresahana […]. Ho an'ireo mpila ravinahitra, ny lehilahy “amin'ny endrika” qatari dia mitondra solomaso avy amina marika malaza, penina lafo vidy eo amin'ny paosin-tratran'akanjony thowb, manana finday hiaka farany, ary fiara na 4 X 4 ambony karazana. Io sary io mamela antsika hisaintsaina fa mpanankarena izy ary mora aminy ny miaina sy mirendrarendra. Tsy isalasalàna fa marobe ireo Qataris manankarena, saingy ny ankabetsahany dia toa antsika ihany. Betsaka ireo lehilahy Qatari no sahirana ara-bola. Matetika ry zareo no mindrana vola mba handoavany ireny fiara manaitra maso ireny sy ny sasany amin'ireo solomaso fiaro amin'ny masoandro ary ireo penina sandoka nalaina tàhaka avy amin'ireo marika malaza. Ny endrika lafatra asehon-dry zareo ivelany dia noho ny toetsaina ilonan'ireo Qataris, na eo amin-dry zareo samy zareo aza : resaka maha-lehilahy sy voninahitra daholo izany ; ireo lehilahy qataris dia samy mifampitazana, toy ny fanaon'ireo vehivavy mazàna, mampiasa loha an-dry zalahy ny fomba famindrany, ny mahafantatra hoe tsara pasoka ve ny thowb-ny, inona no fiara fitondrany ary tsara bory ve ny volombava sa tsia. Mino isika, fahatany, fa ny ankamaroan'ireo lehilahy ao Qatar dia miaina eo ambany fiahian'ny fianakaviany manankarena ary mandany ny andron-dry zareo mihazakazaka anatin'ny fiarany na mipetraka eny amin'ireny trano fisotroana kafe ireny. Eny, misy vitsy an'isa manao an'izany, fa ny ankamaroany dia milanja andraikitra mavesatra eo an-tsorony. […] Araka izany, ny torohevitro dia mitodika amin'ireo mpila ravinahitra, na iza na iza, dia ny handingana ireny sakana ireny sy hianatra hamantatra ireo lehilahy ao Qatar araka ny maha-izy an-dry zareo.
Kei, izay Qatari, manoratra ao amin'ny bilaogy Mr Q hoe mahamarika izy fahasamihafàna eo amin'ny fomba fihetsiky ny olona manoloana azy rehefa akanjo nentindrazana  no itafiany:
Fisaina somary mampalahelo izany, ny thobe  dia fitafy iray goavana, notenomina sy nohetezana mba hahafahan'ny rivotra mivezivezy ao anatiny hampangatsiatsiaka anao ary manakana ny hafanan'ny masoandro noho ny karazan-damba sy ny lokony (fotsy no mahazatra). Nisaintsaina momba ny thobe aho ary nanomboka nihevitra momba ireo tombony entiny sy ny maharatsy azy, eo amin'ny sehatry ny fifandraisana sôsialy. Voamariko rehefa mitafy thobe aho, ny sasany mandray ahy tsara rehefa any anaty magazay, fa any an-kafa, manao tsoakevitra ry zareo hoe mpanankarena aho ka dia asondrotr'izy ireo ny vidin'entana. Nahoana? Tena fanavakavahana amin'ny endriny faran'izay tsotra izany. […] Voamariko manokana hoe rehefa mitafy thode aho, tao anaty fanakadrihana (elevator), toa somary mafy vava tsy miteny “arahaba” amiko ireo mpila ravinahitra, raha miohatra amin'ilay izaho mitafy “complet” (izay fitafiko ihany koa). […] Angamba fiahiahiana fatratra izany, fifanandrifian-javatra, angamba noho izaho mitandrina be amin'ireo zavatra ireo, saingy minoa ahy ianareo, tsy manana endrika mampahatahotra aho, ary raha ny mahazatra dia mitsiky sy miteny Salam mandrakariva aho rehefa miditra toerana iray. […] Ny vahaolana? Tokony ho betsaka ireo mpila ravinahitra no hitafy thode mba ho foana ny fefy manasaraka ireo Qataris sy ny vahiny. Sady izao koa, miaina anaty firenena iray isika, izay mampirehareha ahy ny milaza an'ity, lasa betsaka olompirenena samihafa ary be fandeferana (Manantena aho). Ôh! ary ho an'ireo izay mihevitra ny mety hitondràna thobe, ataovy ! Ho faly ry zareo Qataris hahita hoe mba mandray ny kolontsainy ireo mpila ravinahitra, ary, ihany koa, hitafy zavatra iray ahazoana aina kokoa ianareo!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/08/30/149560/
 Qatar Visitor: http://www.qatarvisitor.com/index.php?cID=412&pID=1510
 akanjo nentindrazana: http://blog.iloveqatar.net/2009/03/to-thobe-or-not-to-thobe/